मनोरंजन – Cn Chautari
समयसमयमा । चर्चामा आइरहने म-हि-ला अधि-का-रक-र्मी सावित्री सुवेदी चर्चामा यो भन्दा पहिले पनि विभिन्न ब-या-न-का कारण चर्चामा आएकी उनी त्यसरी नै भा-इ-रल ।उनले एक अन्तर वार्तामा आफु बा-बु वि-ना-को आमा बन्न चा-हे-को उल्लेख गरेकी छिन् । आफु अहिले तीस वर्षको भएको भन्दै अबको पाँच वर्ष पछि कुनै पुरुषसँ ग-यौ न स-’म्प-र्क गरेर ब-च्चा ज-न्मा-उ-ने योजना रहेको बताएकी हुन् । उनले पु-रु-ष-लाई भाडामा लिएर आ-मा ब-न्न लागेको विषय अहिले च-र्चा-मा आएको छ । विशेष गरेर पश्चिमा देशहरुमा चर्चामा रहेको सिं-ग-ल मदर नेपालमा पनि आफुले सु-रु गर्न लागेको जनाएकी छिन् । यसमा कुनै पनि महिलाले आ-फु-ले चाहेकोपु-रु-ष-सँग केही रकम दिएरयौ ,न स-म्प-र्क राख्ने ग-र्छ-न तर त्यो युवक । त्यो बच्चाको बुवा भने हुँ-दै-न । अहिले महिलाहरुले पनि पुरुषका लागि सन्तान ज-न्मा-उ-ने गरेका घ-ट-ना-हरु समयसमयमा च-र्चा-मा आउँने गर्दछन् ।
घर काठमाडौ । कपनमा बस्ने आइत लालकि श्रीमती लाल माया हो । आइत लाल गाउँमा बस्ने अनि आफ्नो श्रीमती लाल मायालाई कपन भन्ने ठाउँमा रख्थे । उनकि श्रीमती अहिले ५१ वर्षकि भइन ।श्रीमती लालु मायालाई उनको छोरिले । बाटोमा एउटा सानो लालु मायाको छोरा भन्न् सुवाउने १९ वर्षको उ भन्दा ३० वर्ष कानछाे केटासग बाटाेमा सग्गै बसेको देखिन । उनको छोरीले के गर्नु भको यो ? भनेर प्रश्न गर्दा ।बिचारा ती उसको श्रीमान् आइत लाल आफ्नो । श्रीमतीको यस्तो ह’र्कत देखेर के भनछन । आखिर लालु मायाले किन गरिन यस्तो ? आखिर के चाहिन्छ ? के नपुगेर उनलेे आज त्यो बाटो रोजिन ? हेर्नुहोस तलको भिडियाे । https://youtu.be/AbjEaaPRLfo
श्रीमानलाई देखाउनकै लागि । भएपनि अर्को बिहे गर्न चाहन्छु म कोही केटा छन् रु भने सम्पर्क गर्नुहोस् ।म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो ।हामी दुई श्रीमान् श्रीमती हाम्रा दुई छोराछोरी सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउटा पुस्तेनी घर थियो । हाम्रो भागमा तीन कोठा लाग्यो ।हामीलाई बस्न तीन कोठा नै हामीलाई प्रर्याप्त थियो ।घर भाडा तिर्नु नपर्नेभएकाले हामी दुई बूढाबूढीको कमाइले हामीलाई छेलोखेलो थियो । एक दिन श्रीमान्ले केके सुनेर आउनुभयो,। अनायस नै राती इजरायलको कुरा निकाल्नुभयो । त्यो दिनदेखि त मेरा श्रीमान्ले सँधैँजसो केही न केही इजरायलका बारेमा नयाँ कुरा ल्याएर मलाई दिनहुँ जसो सुनाउने गर्न थाल्नुभयो ।एक दिन मैले झर्को मान्दै भने हामीलाई के काम इजरायलको गफ । न जाने गाउँको बाटै नसोध्नू ।किन र तिमी पनि जाऊ न इजरायल १
video ..टिकटकमा आफ्नो प्रतिभा देखाउदै टिकटक भिडियो सहित !
उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने । एउटा पनि केटा नपाएपछि सहर भरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् । यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो सहरमा एक जना पनि अविवाहित पुरुष छैनन् । तर, ६ सय जना अविवाहित महिला छन् । ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका तरुनी छन् । महिलाले नै भरिएको त्यो सहरमा महिलाकै बोलवाला छ । तर भएर के गर्नु ? पुरुष नपाएर अविवाहित महिला छटपटाउन थालेका छन् । उनीहरुले हालै एक सामूहिक अपिल गरेका छन् अविवाहित केटाहरुलाई आफुसँग सम्बन्ध गाँस्न अनुरोध गर्दै । ब्राजिलको यो सहर मात्र होइन रुसमा पनि हालत यस्तै छ । केटाहरुको संख्या निकै कम छ केटीहरुको भन्दा जसका कारण महिलाहरुले जस्तो पाएपनि केटा खोजेर बिहे गर्नैपर्ने अवस्थामा छन् । अस्ट्रेलियामा पनि पुरुषहरुको खडेरी नै पर्न लागेको त्यहाँको एक अनलाइनले जनाएको छ । भिक्टोरियामा १ सय जना महिला